ABOORKU waxuu dhisay SARTA looyaqaano Dun,dumo isagoo adeegsaday Candhuuftiis iyo Kaadidiisa, Inaguna---.
Waxaan jeclahay marka hore inaan hambalyo iyo bogaadin halkan uga soo gudbiyo dhamaan Xaq udirirka Reer Ogaadeeniya- Ciidanka JWXO iyo madaxdooda, Odayaasha iyo Marwooyinka, Aqoonyahanka, Abwaanadda, DHalinyarada iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan ee kale, siday ugu dhabar adaygeen geedi socodka halganka xaqa ah, hana ku bishaareystaan inay guusha gaadhi doonaan idamka alle.
Hadaan dulmaro dhibka loo geystay shacabka masaakiinta ah waa wax aan lasoo koobi karin xataa hadii Suxufiyiinta caalamku isugu tagaan inay wax kaqoraan. Waxuu halmar cadowgu u kulmiyay dil, xidhay,boob iyo cunaqabatayn ku habsatay oo sababtay gaajo, kadibna ay dadku Qaadhaan sida geedka markey biyo la,aan kudhacdo u Qaadho, dabadeedna layidhaaho ( geedkii wuu qaadhay oo macnaheedu yahay- mana dhiman mana noola ). Waxaa gabi ahaamba meesha kabaxay midabkii ciidda u ekaa ee asalka loo lahaa ileen waad ogtihiin oo dadku waxay kasoo jeedeen reer Qureesh.
Dad badan waxay aamin,sanyihiin ITOBIYA waa dowlad weyn oo xoog badan weyna adag tahay in laga guulaysto. Saaxiibayaal hadii la doono in bani,aadmiga wax laga dhaadhiciyo waxuu u baahanyahay tusaaleyaal cad,cad oo u sahla inuu wax fahmo.
Waxaa jira noole loo yaqaano Dhuug, Geela ayuu ganaa ( qaniinaa). Boqol halaad iyo baarqabkooda ayuu geed hoostii ku aruuriyaa. Waxaa jira oo kale noole loo yaqaano Kud,Kude- waa noole aan lahayn xarakaad iyo socod lasheegi karo, haseyeeshee wixii geedkiisa ugu yimaadda wuu ka adagyahay.
Waxaa jira oo kale noole loo yaqaano Aboor. Waxuu ku caambaxay dhismaha SARTA loo yaqaano Dun,Dumo oo hadii Gantaal lagu dhufto uuna gaadhsiin karin dhaawac lasheegi karo. Caruurtu waxay ku sheekaysan,jireen Aboorka waxaa ladhisa Dun,dumada Jinka habeenkii. Hada waxaanu rumaysanahay inuu ku dhiso raganimadiisa iyo isgoo isku tashadey oo adeegsadey candhuuftiisa iyo kaadidiisa. Haba yaraatee muuna wax caawimaad ah kahelin UNka ama cid kale midna.
Waxaan ku dhiirri,galinayaa dhamaan bulshada aan kor kusoo xusay inay Ilaahay ku kalsoonaadaan. Waxaan aragnaa waagi baryaba iuu la imaanayo maamul uuna cidna kala tashaneyn haduu dili, haduu nooleyn, haduu cisayn ama dullayn.
Gabagabadii waxaan leeyahay - Midnimo, Mintid, Iskutashi iyo Ninkii dhoof ku yimidbay geeridu dhibaysaa.